NextMping | Ramangwana Rebasa uye Simba reBrand
Munguva pfupi yapfuura ndanga ndiri muenzi pane Zync vamiririri podcast akateedzera kutaura nezve ramangwana rebasa uye nesimba rechiratidzo.
Mu podcast isu (iyo Zync timu uye neni) takakurukura nei kuve nemhando yakasimba yemhando yakakosha izvozvi zvakanyanya kupfuura nakare kose.
Hechino chinyorwa cheiyo podcast - kana unogona kuiteerera pano.
Dennis: Mhoroi mose uye tinogamuchirwa kuvhiki rino zvinhu zvose zvine zita. Isu tinokudzwa chaizvo uye tinofara kuti tine muenzi akasarudzika, Cheryl Cran, ari kubatana nesu podcast nhasi pane ramangwana rebasa uye brand.
Cheryl Cran inguva yemberi yehunyanzvi hwebasa uye muvambi we NextMping.com ndiye munyori wemabhuku mapfumbamwe anosanganisira kechipiri chinyorwa che "NextMapping - Fungidzira, Enda uye Gadzira Remangwana Rebasa" uye ibhuku rebasa reshamwari uye isu takanyatsoshanda naCheryl pazita NextMapping uye pakumiswa kweNextMapping. Ano zvakare iyo nhamba yekutanga ramangwana yebasa influencer uye wepasi rose mubairo anokunda consultant. Akaratidzirwa muForbes, Huffington post, Metro, New York, CBS uye zvakawanda. Saka Cheryl, ndinokutendai zvikuru nekujoinha nesu nhasi uye tinofara chaizvo kutaura nezveramangwana newe.
Cheryl: Ndatenda Brad. Ndiri kufara kuva pano.
Dennis: Tinoda kusvetukira mukati maro nekuti timu ine mibvunzo yakawanda kwauri uye isu tinonyatsoda kuwana maonero ako pane zvichaitika zvichibva pane zvese zviri kuitika. Saka isu tinonyatsoda kutanga nekukubvunza iwe zvichibva pamafambiro ari kuita zvinhu izvozvi uye zvese zvatiri kuda kuwana nzira yedu, iwe unofunga kuti nzvimbo yebasa iri kuzoshanduka sei mumakore mashoma anotevera?
Cheryl: Zvakanaka, kutanga kwezvose, ndinoda kutaura kuti takafanotaura makore gumi apfuura kuti 10% yevashandi vangave vari kure vari kushanda panosvika gore ra50.
Isu hatina kufanotaura denda sechimwe chezvikonzero zvekuitika kwayo, asi zvese zviratidzo uye zvese pateni tsvagiridzo yatakange taita mukucherechedza pateni zvainongedzera kune ramangwana rakatenderera kwataizove nemichina yakawanda, marobhoti akawanda, hunyanzvi hwakawanda hunyanzvi, izvo zvaireva kuti vanhu vangave vari kutsvaga kushanda kure. Denda risati rasvika, akawanda masangano aive otanga kuita mafambiro akananga kune iri kure tsika tsika. Zvino izvo zvaitika idenda rakamanikidza, saka tiri kuenda kuzoona ramangwana rinoramba riri basa rekure rakanangiswa.
Zvatichaona nazvo ndizvo zvinodiwa kuti vatungamiriri vatungamire zvakatosiyana neyavakatungamira kare. Tichaona zvikwata zvakawandisa zvakazvimirira. Tichaona masangano achitendeukira kune hwakawanda hutungamiriri hwehutongi uye hutungamiriri hwemhando yehukama. Zvekare, izvi zvinhu izvo, zvandakanyora nezvazvo mumabhuku angu uye zvatakataura nezvazvo. Iyo ramangwana rebasa rinozove rakawanda revashandi rinotungamirwa maringe nekambani inotungamirwa. Uye ini ndombomira ipapo ndongoisiya ichisiyiwa yakavhurika yekumwe kuongorora.
Dennis: Saka kana iwe uchitaura pamusoro peiyo inotungamirirwa nemushandi, iwe unofunga kuti ndechipi chimwe chezvinhu icho chinozoshanduka kana zvinhu zvakatungamirwa nemushandi zvinopesana nesangano?
Cheryl: Zvakanaka kutanga pane zvese isu tichaona kuwedzera kweiyo gig hupfumi. Tichaona vakawanda vashandi vachiti, iwe unoziva chii, ini handidi kunyatsoshandira imwe mubatanidzwa. Ini ndoda yakawanda indasitiri ruzivo. Saka ini ndiri kuenda kunoshandira akati wandei masangano sekontrakta, se freelancer, uye kushanda nenzira inovabatsira kuvaka kwavo ruzivo base asiwo inowedzera avo ramangwana sarudzo. Saka mushandi akatungamirwa zvinoreva kuti kunyangwe nemamiriro azvino atiri uye hongu, ndiri kunyatsoziva huwandu hwekushaikwa kwemabasa muUS neCanada parizvino panguva yedenda, uye kuti kunyangwe zvakadaro tiri kuona kuti kuchine kushomeka kwevashandi kana zvinhu zvadzokera kune zvakasarudzika, saka hazvisi kuzodzokera kune zvazvaive. Ichaenda kune chinotevera chakajairwa uye icho chinotevera chakajairwa ichave inzvimbo yakatosiyana apo vashandi vanozosarudza kuti yakawanda sei uye sei yavanoda kushanda.
Vashandi vanozoda kushanda kure sechikamu chetsananguro yebasa. Vashandi vari kuenda kunoraira maitiro avanoda kushanda uye masangano achazofanira kuwana vanhu vane tarenda nemasangano achafanirwa kusangana nezviri kudiwa nemushandi uye nemabatiro avari kuda kushanda uye icho chingori chokwadi chitsva chekuti masangano anga kuchinjira pamberi peizvi. Asi ikozvino tichinyatso tarisa kuti tinokwezva sei tarenda rakanakisa nekuve nemushandi akatarisisa nharaunda maringe nenzvimbo yakatarisana nekambani.
Jeremy: Cheryl, iwe unofunga kuti chii chichave chakakosha kune ma brand uye vatengesi kuti vazive nezve chinhu ichi chitsva?
Cheryl: Ndinofunga inoshandura nhaurirano yemhando yacho. Ini ndinofunga kakawanda patino tarisa rudzi rwechokwadi uye, uye nekushanda newe vakomana, isu tinoziva maitiro ako akanyatso kudzika uye iwe unotarisa kumakona ese, unotarisa kuungana kwevanhu, yako mutengi uye zvese izvo zvinhu izvo imi vakomana munoita chaizvo.
Ini ndinofunga brand manje inofanirwa kuve neshoko rekuratidzira kukosha kwesangano uye kuratidza vashandi kuti mhando ndeyekodhi inotungamirwa nevashandi. Iyo mhando inoda kuenderana nemaitiro emushandi mutsva. Iyo mhando ichazoda kuve neemaitiro ekure, maitiro ezveashandi uye kuenzanisa mhiko yevashandi neruzivo rwevashandi kuwedzera ruzivo rwevatengi.
Dennis: Uye ungati here, Cheryl, vashandi vanozotarisira zvinhu kuti zvive zvechokwadi uye zvinyatsojeka uye zvakananga.
Cheryl: Ehe, pamwe nehuwandu hwenhau dzekunyepedzera dzatakatambudzwa nevanhu vanonyatso tarisisa kuenderana uye kutendeka, izvo zvinosvika pakuvimbika. Saka ivo vari kutsvaga izvo mumaki. Ivo vari kutsvaga makambani ari kurarama iwo maricho, ari iwo marangi, ari kuendesa iyo mhando. PaNextMapping chimwe chezvinhu zvakatishandira chaizvo kana tangozvimisikidza icho nemwi varume yaive chokwadi chekuti chiratidzo chakanyatsoenderana nezvatiri, izvo zvaive kubatsira vanhu kusvika kune zvinotevera. Saka kana mucherechedzo usingaenderane, vanhu havapo.
Iwe hauchisina nguva zvakare yekuhwina vanhu pamusoro, iyo mhando inofanirwa kumhara ipapo ipapo uye zvechokwadi kuitira kuti vanhu vaiwane ipapo ipapo uye ivo vawane kukosha kwechisungo ipapo ipapo kubva kuchiratidzo.
Gabi: Kutaura padanho resangano, chimiro chemashandiro atinoita, chinoshanduka nemaawa akasiyana, basa rekure, sekutaura kwawakaita kana chimwewo chinhu?
Cheryl: Oo, zvese zviri pamusoro. Hongu. Ndakabvunzwa mubvunzo rimwe zuva pane zvivakwa. Zvinorevei kuti post denda rechokwadi rinoreva kumakambani zvivakwa? Huye, akawanda masangano, pre denda, isu tave kutotarisa kurudzi rwekuti chii chiri kure basa rekushanda rinotaridzika? Iwe unoziva, chii chikamu chevashandi vanoshanda muhofisi? Ndeipi muzana ingashanda kure? Tinoita sei izvozvo? Zvakanaka, izvo zvinoda mutemo wese webasa riri kure, urwo makambani mazhinji arikutarisa izvozvi. Saka basa rinenge riripo, ini ndinofunga zvakawanda zveya la carte maringe neapo chete nzira imwe yekushanda. Saka ini ndinotenda mune ramangwana zvichave zviri here kuti iwe unoda kushanda izere nguva iri kure kana iwe unoda kushanda muhofisi 50% yenguva iri kure, 50% yenguva iwe wakanakira irwo rudzi rwebasa.
Tichaona kuenderana kwakakura kwakatenderedza hunhu uye maitiro ebasa uye mhando yebasa rinovaenderana zvakanyanya. Anecdote inonakidza yenguva yatiri iye zvino ma introverts ari kubudirira panguva yedenda. Sei? Nekuti kazhinji vanoita zvirinani kushanda vega. Iwo ndiwo mabuditsiro ari kunetsekana nekuti anokura mumunhu kumunhu mukoko wekuita muhofisi nharaunda, tatova tichiona, munoziva, mune, mune, mhando yekureruka kumashure post denda, tiri kuona masangano achitarisa nhamba dzakadzikira dzevanhu muhofisi. Uye ini ndinofunga maitiro iwayo acharamba achienderera. Ini ndinofunga tichaona miviri isingadziye nemahofisi uye zvimwe zveiyi hybrid yekure kure muhofisi uye anotenderera zvikwata. Uye ini zvakare ndinofunga kushandiswa kwehofisi kunenge kuri kuwedzera kweiyo, WeWork mhando chimiro. Podhi dzezvikwata zvevanhu vanouya kuzotora zvirongwa. Vacharamba vachishanda, munoziva, zvakare, chemasanganiswa kure uye muhofisi. Uye ini zvakare ndinoona mahofisi, yemakambani real estate inotarisa kungangoita seAirbnb kune vagari. Tichaona Airbnb yemakambani kwauchazokwanisa kushandisa nzvimbo kupfuura mashandisiro ari kuita iyo parizvino. Saka yakawanda shanduko iri kuuya uye nekukurumidza chaizvo.
Christian: Iwe wakataura nezvenzira iyo ichaenda kunopesvedzera mabhizinesi. Ini ndanga ndichizvibvunza kana denda richachinja maitiro anoitwa nehurumende?
Cheryl: Hurumende, ndinotenda zvakafanana nemushandi anotungamirwa nemakambani, tichaona hurumende inotungamirwa nevagari uye tanga tichiendako. Ndiri kureva, muCanada isu tine rombo rakanaka nekuti isu tinorarama demokrasi yechokwadi, asi isu tichaona zvakawandisa zvimwe zvezvatave tichiona ne, nemari yakapihwa mari kune bhizinesi diki uye iwe unoziva, ivo, vashandi vehutano, iwo akakosha masevhisi kubva kuhurumende basa maonero.
Seindasitiri hurumende ine basa rakawanda rekuita kuti ubate ramangwana rebasa.
Uye ini ndinogona kutaura izvo nekuti ivo vanga vari vatengi vangu uye ndivo vamwe vevatengi vangu.
Uye zvandiri kureva neizvozvo mazhinji maindasitiri echinyakare senge mari yehurumende, inishuwarenzi, vanga vakaomarara mukugadzirisa kwavakaita nzvimbo yebasa zvekuti vanga vaine dambudziko mukugadzirisa basa rekure chairo re, rei , pane izvo zvaifanira kuitika munguva pfupi yapfuura, asi zvakare vari kunetsekana nekukwezva uye nekuchengetedza tarenda kana vanhu nekuti ivo vanonyanya kuomesera maitiro aunovashandira uye navo.
Saka ndanga ndichiti kwemakore, nzvimbo mbiri kwadzinenge dzichirwadza zvakanyanya sekuti vashandirwi vanozove hurumende nemasangano evashandi. Uye chikonzero cheicho chimiro hachichinjiki uye chakanakira kwatiri kuenda kune ramangwana rebasa. Izvo hazvireve kuti iwe haugone kugadzirisa echinyakare masangano, asi kune hwakawanda hutungamiriri hunofanirwa kuburitswa kuti usunungure uye uite kuti vasangane neiri kure basa chairo, asi zvakare sangana nebasa rinoshanduka chokwadi, sangana neiyo gig hupfumi chaihwo.
Dennis: Zvandiri kunzwa iwe kuti ndepamberi pekuti, iwe unoziva, angave aive mabhizinesi kana hurumende dzaive dzakatemerwa chaizvo maitirwo ezvinhu. Zvirikuitika izvozvi ndezvekuti vagari, vanhu, vashandi vari kuti kune zvese hurumende nemabhizinesi, izvi ndizvo zvatinotarisira uye izvi ndizvo zvatinoda. Uye kubva pakuona kwechiratidzo, iro simba remagetsi riri kuchinja kubva kune, iwe unoziva, hurumende nevashandirwi kudzokera kumashure kuvanhu. Iwe ungati ndiko kuongorora kwakanaka here?
Cheryl: Ndingati izvo chaizvo, chaizvo chaizvo. Saka semakambani ari kutungamirwa nevashandi, hurumende iri kutungamirwa nevagari kana kwatinoda kutenda, semuenzaniso, muCanada pano tinoda kutenda kuti tiri democracy uye isu tine rombo rakanaka tine hutano hwehutano , munoziva, isu tiri, ndinonzwa nzira yatakashanda isu senyika munguva yedenda iri yanga iri nyeredzi. Saka isu takanyanya, tine rombo rakanaka kunyangwe sevashandirwi vehurumende, kana chako hachizi kuenderana nemakwikwi emakwikwi. Vanokwikwidza neHurumende vava maAmazon neGoogle uye ese ma tech mafemu uye kana ndiri wemireniyoni ndichitarisa pane zvese zvandinogona uye pane zvakawanda zvingasarudzwa izvozvi kunyangwe tiri mudenda iri, pane fungidziro yemamiriyoni makumi matatu nemaviri yepasirese kushomeka kwevashandi pasirese kusvika gore 32.
Hurumende inofanirwa kutarisa maitiro ekukwikwidza neayo Amazons, ari Googles, yekutanga mukushanduka-shanduka asiwo muchimiro kuitira kuti tigokwanisa kupa masevhisi atinoda kupa.
Kubasa kuri kuita zvakanyanya kutarisa vanhu uye enda kune izvo vanhu vari kuda uye vari kuda kuzvienzanisa neyechinyakare bhizinesi mindset yavanofanira kuchinjika kwatiri nekuti iyi ndiyo mashandisiro atinoita.
Mibvunzo iyo hurumende inoda kubvunza iri pamusoro pekuti chii chinodiwa nemunhu uye ndedzipi mimwe mhinduro dzinogoneka?
Panyaya yemasevhisi masevhisi ndiyo yakanyanya kushandirwa nemunhu, chat chat, AI kana robhoti? Ndiro ramangwana idzva remubvunzo webasa. Nderipi basa, chii chiri kudiwa uye ndeipi mhinduro yakanyanya? Ndizvo chaizvo zviri kutyaira kwavari kuenda.
Gabi: Ibasa ripi iro kubatana kwevanhu nekudyidzana kuchizoenda kumberi sevashandi, sevatengi, senharaunda zvakaenzana?
Cheryl: Kune varidzi vekutya kunze uko vangangogara, marobhoti ari kuuya uye vari kutora mabasa emunhu wese uye hauchazoda vanhu futi. Kutsvagurudza kwatakawana kuri, hachisi chokwadi. Muchokwadi, musangano wezvehupfumi hwepasi rose urikuti vanhu vakakosha kupfuura nakare kose. Nekudaro, chikonzero chiripo chekuti rondedzero yakatenderedza marobhoti iri kuuya nekuti inotungamirwa nekutya hunyanzvi danho, inoenderana neramangwana chokwadi. Saka izvo zvaunazvo iboka revanhu rinofanirwa kuve nehunyanzvi uye kurongedzerwa kuitira kuti vawedzere tekinoroji kusimudzira masevhisi atiri kupa kuvanhu.
Saka chaizvo zviri kupfuura vanhu kupfuura nakare kose mune iro ramangwana revanhu. Izvi zvinoreva kuti isu semabrugwa tinofanirwa kunge tichitarisa kuburikidza neiyo lens yekuti izvi zvinobatsira sei vanhu?
Tinofanira kubvunza, izvi zvinobatsira sei vanhu?
Iyo ramangwana ndeye vanhu kutanga pamwe pamwe nekuwana purofiti. Ini ndinofunga kana chero, denda iri riri kumanikidza isu tese kuenda, zvakanaka, mirira rwepiri, tarisa mhedzisiro isu tese tichimbomira pane zvakatipoteredza kana tingavaka sei ramangwana rakajeka uye tinoita chiratidzo chedu chinotevedzera kusimudzira?
Uye isu takaonawo kuti vanhu vawana zvakawanda nezve vanhu mukubata nehupenyu hwavo chaihwo. Saka tinova sei vatungamiriri vanonzwira tsitsi kumamiriro ezvinhu evanhu?
The otomatiki uye remangwana robotized ari kutimanikidza isu kuve vanhu vari nani uye vanhu vari kuzodiwa.
Uye hunyanzvi hwekuvandudza kwedu hunofanirwa kuve hwakatenderedza zvinhu zviviri.
Nhamba yekutanga, hongu tinoda kuwedzera tekinoroji yedu yekushandura.
Nhamba yechipiri, tinofanira kuwana vanhu vari nani.
Tinofanira kusimudzira tsitsi dzedu, isu tinofanirwa kusimudzira njere dzepfungwa. Tinofanira kusimudza kunzwisisa kwedu mashandiro atingaita seni uyezve isu. Uye ini ndinofunga iwo mukana unonakidza wezveramangwana.
Dennis: Zvinonakidza kuti unodaro nekuti ini ndinofunga kuti vashambadziri nevashambadziri vagara vachitaura, hazvo, isu taigara tichiteerera vatengi uye ivo vanga vakarurama mukuwongorora uku uye vanga vachiteerera. Asi ini ndinofunga maitiro avanofanira kuteerera angatofanira kuve akasiyana mune ramangwana. Saka vasati vaterera kwavanotenga kuti vanhu vanotenga sei kana nei vachitenga, ndinofunga iko kuteerera iko zvino kunofanirwa kunge kuri iko kunovakurudzira kutenga kana izvo zvinovaita kuti vatore chikamu nekambani kana, kana kusarudza maraki. Saka izvo, izvo, zvinoita sekunge kupinda mukati nekuteerera pane yakadzika zvakadzama danho. Iwe wakataura nezvekuve munhu ari nani. Ini ndinofunga isu tinofanirwa kuve varikushambadzira uye vatengesi zvakare. Tinofanira kuteerera neimwe nzira. Isu tinofanirwa kuteerera nezvishoma pane zvatinotarisira, iwe unoziva, nekuti pane mhando mbiri dzenzira dzekuteerera. Unogona kuteerera uye kumirira kuti munhu abvume zvinhu zvese zvauri kutofunga. Kana iwe unogona kungopinda uine isina pfungwa pfungwa uye teerera uye unzwe chaizvo zviri kutaurwa nemunhu. Uye ini ndinofunga ndiko iko kusuduruka kwatinga fanirwa kuita mukuita nani vatengesi nevashambadzi sevanhu.
Cheryl: Pane zvandaizodaidza kuti pasi vateerere. Iko kwauri kuteerera kuti uone kana yako poindi yekuona ichasimbiswa uyezve kune intuitive kuteerera uye izvo zvinoda mukana wepfungwa uko pasina fungidziro yekufungidzira uye kune zvakawanda zvakapoterera zvichitsvaga izvo zvinoshamisa zvinhu izvo munhu iyeye aisazombofa, mukati mamwe mazwi, hazvizive kwavari, asi zviri kutorwa nenyanzvi dzekumaka.
Ndakaona izvo newe pamwe nechikwata chako, imi vakomana mune kugona kwazvo pane izvozvo. Saka zvinoita sekuverenga pazasi pechinhanho chepamusoro uye kugona kuisa chiratidzo chechivimbiso nekuzadzikiswa kwevanhu kweiyo vimbiso. Ini ndinofunga saka pane, pane akasiyana matanho ekuteerera. Ini ndinofunga isu tave kupinda panguva yeiyo yakadzika intuitive kuteerera uko kwakanangidzirwa pane izvo chinhu chevanhu pano, uko iyo brand iri kuzosangana nezvinodiwa nevanhu.
Jeremy: Munofunga sei mabhizinesi nema brand, uye nekutaura chokwadi hurumende inogona kubudirira mune ramangwana nekuti nekumwe kwese kushanduka uku, ndinoreva kuti kune mutengo wakabatana neizvozvo, handiti?
Cheryl: Ndinofunga zvinodzikira pane zvatinoita NextMping, uko kuri kubatsira vatungamiriri kuwedzera kugona kwake kwehutungamiriri. Izvo zvinonyatsoda mutsva anochinjika wehutungamiriri mindset kutanga nezva.
Denda rakamanikidza nderekuziva kuti isu tese tinofanirwa kuchinjika isimba rekukanganisa rave kukonzera mabhizimusi kuteerera, izvo zvinonyanya kufadza nekuti pre denda iwe unogona kuve neboka revanyanzvi seni ndichifamba ndichiti denga riri kudonha uye munhu wese ari kuenda, hongu, hongu, ticharamba tichingoita zvatiri kuita nemazvo?
Panzvimbo iyoyo isu ikozvino tine hupenyu chaihwo hwekuvhiringidzika kwepasirese zvekuti munhu wese ari kunzwa mapoinzi anorwadza eizvozvo.
Saka une sarudzo mbiri mukuchinja uku uye iko kukanganisa. Unogona kufuratira marwadzo uye kuenderera mberi sezvawakaronga sezvawakaita pre denda uye, uye ndicho chisarudzo. Uye sarudzo iyoyo inogona kukutungamira kune isingakoshe mune ramangwana sebhizinesi .B, unofanirwa kuvhurika pakutora kana kutora nekuti mumwe munhu anonetsekana kana anodisa kuchinjisa ari pamberi pemutambo. mukupindura kunorwadza pfungwa munguva yakapfuura,
Ndingati sehunyanzvi hwepfungwa kuti nharo inogona kunge iri, chokwadi izvi zviri kudhura mari yakawandisa KUTI urege kuchinja iyi.
Uye ini ndinofunga nharo nyowani ndiyo mutengo wekusaita shanduko uye iyo data uye iko uye kwechokwadi kweizvozvo uye kuva, nekuti mune zvandakaona, vatungamiriri vazhinji vanoomarara uye vakagadzika munzvimbo yavo kutenderedza iyo ego.
Kunyangwe iine makore anopfuura makumi maviri ezviitiko mukati mechikwata chedu, hapana mumwe wedu ane ruzivo rwezvinoitika izvozvi. Nekudaro izvo isu zvatiinazvo kugona, kuchinjika uye kuda kuisa ego padivi kutsvaga nzira dzekubatirana nekuwedzera kukosha.
Chichaendesa mberi vatungamiriri kuda kutaura, ini handizive, asi isu tine timu izere nevanhu vakangwara chaizvo uye pamwe tichavhura pfungwa, tichaenda kuzhinji source, tiri kuzokwidza hunyanzvi hwedu hwehutungamiriri kuitira kuti isu tigone kuchinjika, tichichinjika zvatinogona mazviri, kuti tigone morph, isu tinokoshesa pane zviri kuitika uye zvine hungwaru mutengo wekusaita shanduko ndiko kugona kwedu kwazvo ramangwana.
Dennis: Zvandiri kunzwa ndezvekuti vanhu vari kunyatsoona kuti havagone kungobvunza vamwe kuti vagone kuchinjika vasina kuzvishandura. Rudyi?
Cheryl: Hapana mubvunzo. Saka chinhu chimwe chandinoda kujekesa ndechekuti hatisi kutaura nezvazvo patinotaura nezve hupfumi hwakatungamirwa nevashandi kana bhizinesi rinotungamirwa nevashandi, isu tiri kutaura nezvekuzvidavirira tese. Saka chero munhu kuti semushandi kuti urarame, hausi kuzopona uchiti, zvakanaka, ndinobata makadhi ese, mr mushandirwi, uye ikozvino uchaita chero chandinokuudza kuti uite. Handizvo zvandiri kutaura. Zvandiri kutaura pane kuwirirana kuzvidavirira. Saka vashandi vari kuda kukwidzirisa uye kugadzirisa zvakare vasina kumirira kuve kwemushandirwi wavo kuti avaitire izvozvo.
Unoziva, mune mamwe mazwi, kuva iye mudzidzi kweupenyu hwese uye uchiti, "Ndiri kuzotora ruzivo rwangu uye kudzidza kwangu kuitira kuti ndive anonyanya kutarisirwa uye anonyanya kuchinjika uye kubatsira kambani pivot".
Panofanirwa kuve nekuzvidavirira kwekudyidzana pakati pevashandi nevashandirwi.
Cheryl: Vatengi uye vatinoshanda navo vandakambotaura kutaura kuti pane yekumuka yekufona iri kuitika izvozvi uye chikamu cheiyo yekumuka kufona yakafanana chaizvo kuma1980s apo mitengo yemubereko yaive 22% uye vanhu vachirasikirwa nedzimba.
Uye makumi mapfumbamwe pataive nehondo uye kuderera kwe2008.
Kuvhiringidzika uku kusimuka kwekufona, uye zvinotungamira kumibvunzo yakaita seiyi, chii chandinofanira kudzidza? Ini ndinoshanda sei? Ini ndinoshanda sei? Ini ndinowedzera sei hunyanzvi hwangu? Ndinobatsira sei vamwe vanhu kuti vabudirire?
Iyo ndiyo mibvunzo iyo sevanhu vamwe nevamwe, kana tikazvibvunza pachedu, saka tichava nebasa rehupenyu hwese kana kudzikama kwebasa. Asi kana iwe ugere kumashure uye iwe uchizoenda, zvakanaka, iwe unoziva, hurumende iri kuzondichengeta. Zvakanaka izvo zvinongova zvenguva yakachena. Izvo hazvisi kutora mutoro webasa rako mukugadzira rako ramangwana.
Kugadzira iro ramangwana ndizvo chaizvo zviri mumaoko edu tese.
Saka pachine mukana wakawanda kunyangwe isu tiri kuenda panguva yakaoma kwazvo munhoroondo uye nenguva yakaoma, yakatosiyana nedzimwe nguva dzakaomarara dzatakambove nadzo munguva yakapfuura, asi isu tichiri kufanira kuita sekuchera zvakadzika mukati nzvimbo imwechete dzatinadzo munguva yakapfuura kuti tizviwane kuburikidza nazvo. Asi kubuda mune izvi, iko kugona kwekubudirira uye kwete kungopona kuri kuzove kiyi kune vanhu avo, vanoita zvakanaka muchikamu chinotevera chepuzzle. Uye, uye ini ndinofunga kuti zvine simba chaizvo kana iwe ukasanganisa zvese zvauri kutaura nezveramangwana rebasa nezvinodiwa nevatengesi nevashambadzi kutsigira zvese izvo.
Dennis: Ndizvozvo chaizvo. Iyo mameseji inofanirwa kuenderana. Position yacho inofanirwa kuenderana. Iwe haugone kuve nevanhu vese ava vanoshanda mumamiriro ezvinhu aya kana kurarama pasi pehurumende idzi. Uyezve kushambadzira nekumaka zvinogara zvakangofanana. Zvakanga zvava sezvazvaive kare. Saka ndezvechokwadi nezvedu isu tese mhando yekutarisa zvese muuzere uye kunzwisisa kuti kuti tibudirire uye kuti tiite izvo zvinhu, isu tinofanirwa kuita zvinhu zvitatu zvawataura. Tinofanira kuva nehutungamiri huri nani. Isu, isu vedu vatungamiriri, tinofanirwa kuve vatungamiriri vari nani uye tinofanirwa kutarisira zvakawanda kubva kuvatungamiriri vedu kana, kana isu tisiri munzvimbo yehutungamiriri, tinofanirwa kuve varidzi veshambadziro uye vanoshambadza uye vari nani pamabasa edu uye kunyanya kuda kuzvidavirira uye kutarisira kuzvidavirira futi. Uyezve pakupedzisira, kune yako poindi, isu tinofanirwa kuve tiri nani vanhu.
Tinofanira kungova vanhu vari nani. Uye ini ndinofunga kuti ndizvo pakupedzisira izvo izvi zvinouya kwazviri. Uye izvi ndizvo zvatinogona kutora kubva pane zvese izvi. Cheryl, maita basa kwazvo nenguva yenyu. Iwe unoziva, isu tiri, tinofara chaizvo kuva newe pano. Isu tinofara kwazvo kutaura nezve iro ramangwana rebasa uye ramangwana rechiratidzo nekusanganisa izvo zvinhu zviviri pamwechete. Saka ndinokutendai nekubatana nesu. Tinonyatsozvikoshesa. Ndatenda. Saka munhu wese, ndizvo zvese chiratidzo chevhiki rino.